Sababta loo tago sauna waa mid qiimo leh - Sauna kuwa bilowga ah
Saunada - nasashada iyo fayoobaanta
Talooyinka booqashada ugu horeysa ee saunada
Waa maxay taxanaha ugu fiican ee fadhiga sauna?
Kalfadhiyada joogtada ah ee sauna uma wanaagsana caafimaadkaaga, laakiin sidoo kale si aad u raaxeyso. Ma ahan wax natiijo baaris ah oo muujinaysa in ay jiraan malaayiin 5 oo ku nool 2 million saunas ee Finland. Jarmalka sidoo kale, dad badan iyo dad badan ayaa ku dhaaranaya saameynta caafimaad ee faraha badan ee jidhka, maqaarka iyo maskaxda.
Waa maxay sababta ay u tahay inaad tagto sauna?
Gaar ahaan xilliyada qabowga, waxay macno u tahay in si joogta ah loogu tago sauna. Iyada oo loo marayo sauna, jirka oo dhan iyo habka difaaca jirka ayaa la xoojiyaa, taas oo aan ku sii dhawaan karin saameynta cudurka infekshanka.
Dadka qaba xanuunka dhabarka ama xanaaqa, waxaa sidoo kale lagula talinayaa inaad tagto sauna. Natiijada ugu fiican, bukaanka xanuunku waa inuu ku seexdo calooshiisa inta badan, sidaas darteed kuleylka bakeeriga sauna si toos ah ayuu u daboolaa dhabarka. Tani ma aha oo kaliya nasinta muruqyada dhabarka, laakiin sidoo kale nafta. Hase yeeshee, muhiim ma aha in halkan la jiifiyo wakhti kasta, laakiin sidoo kale u fariisto inta u dhexeysa si loo sii wado wareegga wareegga. Dhibaatooyinka rheumatic waxaa sidoo kale laga yareeyn karaa booqashada joogtada ah.
Cudurrada maqaarka qaarkood, sida finanku, waa in la qorsheeyaa jadwalka toddobaadka ah. Kuleylka ayaa si tartiib ah u soo jiidaya maqaarka maqaarka ee la jiido sebum. Tani waxay kor u qaadaysaa habka bogsashada oo badan.
Sauna waxaa lagula talinayaa ma aha oo kaliya saameynta jidhka, laakiin sidoo kale dib u soo kabashada maskaxda. Dad badan ayaa sii kordhaya oo ka cabanaya dareenka iyo cadaadiska, labadoodaba si guul leh ayaa loo jajabin karaa iyagoo tagaya saunada. Safarka booqashada waxaa sidoo kale lagu talinayaa in uu hurdo xanuuno, sida dhididdu waxay dhiirigelisaa daal fiican, taas oo horseedi karta hurdo iyo in si fiican loo seexdo subaxa.
Heerkulka sauna wuxuu leeyahay saameyn aad u wanaagsan dadka oo dhan. Kulaylka shucaacu wuxuu dhex maraa maqaarka jirka oo dhan iyo heerkulka jirka ee kor u kaca ilaa 3 ° Celsius. Iyadoo loo marayo geeddi-socodkan, dhammaan hawlaha dheef-shiid kiimikaadka waa la kordhiyaa, wareegga ayaa kor u kacay isla markaana difaaca jirkuna si dabiici ah ayuu u xoojiyaa.
• Waxaa muhiim ah in la xuso ka hor safar kasta oo lagu tago saunada sauna oo aan degdeg u dhigan. Saacad kasta waxay booqan kartaa waqti ku filan waa in la qorsheeyaa oo lagu nasto oo si fiican u soo kabsado.
• Shukumaan lagu qubeysto oo keliya iyo kabo waa in lagu qaadaa saunada. Dhammaan dahabka waa in laga saaraa horey, sababtoo ah waxay kuleylayaan kulul waxayna keeni karaan dhaawac. Waxaa sidoo kale fiican inaad ka tagto muraayadaha banaanka ka baxsan oo aad dib ugu soo laabtaan muraayadaha indhaha, sababtoo ah gargaarka muuqaalku si dhakhso ah ayuu u socdaa.
• Inta badan, waa in laga fogaadaa in la gaajoodo ama la cuno ka hor intaan la cunin, sababtoo ah tani ma ahan mid ku habboon wareegga. Sidoo kale, cabitaanka khamriga waa inaan la cabin marka lagu jiro fadhiga sauna.
• Kuwa ka soo baxa sauna kuleylka ah waa inaysan si toos ah ugu dhajin barkadda dabaasha, laakiin marka hore si tartiib ah ugu qabow biyaha kadibna ku bilow dabaasha.
• Isku celcelis, 1 iyo 2 oo ah dareeraha jidhka ayaa lumaya markaad qaadatid saunada, oo markaa dib loogu celiyo jirka sida ugu dhakhsaha badan. Tani waxay ku habboon tahay biyaha macdanta ah.
Ka hor intaadan galin sauna waa in si fiican loo maydho si looga saaro jirka dhididka. Kadibna si fiican u qalaji, sidaas darteed dhididka ee sauna ma saameynayo qoyaanka haraaga ah.
Bilowga, shukumaan qubeyska waa in lagu dhejiyaa qolka sauna ee ku yaal bangiga dhexe ama kan ugu sareeya, kaas oo uumiga sauna ka fadhiisan karo ama jiifsan karo. Booqashada Sauna waa inay ugu fiican tahay labo ama seddex kulan oo sauna ah. Jidhku wuxuu ubaahan yahay inta u dhexeysa saacadaha 8 iyo 10 si uu kor ugu kaco heerkulka, laakiin waa in kuleylku dareemo raaxo la'aan, ka hor intaan la bilaabin.
Ka dib fadhiga ugu horeeya ee sauna, waxaan kugula talinaynaa qabow qabow ama qabooban kadibna waxaa ku xiga qubayska hawada iyo 20 mudo nasasho leh oo leh hoor. Si loo ilaaliyo wareegga xilliga qabowga qaboobaha, waxaa lagu talinayaa in la mariyo biyaha marka ugu horeysa qoobabka midigta, lugta iyo gacmaha, ka dibna sii wad dhinaca bidix ilaa sare. Dabadeed sauna waxaa dib loo booqan karaa 12 ilaa daqiiqo 15.
Guud ahaan waxaa fiican in la fadhiisto saunada marka loo seexdo. Natiijo ahaan, ma aha oo kaliya wareegga wareegga oo xasilloon, hase yeeshee, nabaradu sidoo kale way furan yihiin. Marka ugu horeysa ee aad tagto sauna waa in aad isticmaashaa kursiga ugu hooseeya, maadaama ay yar tahay.
Sauna Finnish Wellness
Sauna - Qofkee ayuu ku soo booqanayaa mid aan habooneyn?
Caafimaadka guud, Fayo-dhawrka iyo Cuntada
Fasaxyada caafimaadka ee waalidiinta | Fayo Weynta Maaliyada